Igodo nke Ozi Leuprorelin Acetate Side Effect, Dosage
NADP DISODIUM Nnu
WALNUT PEPTIDE ntụ ntụ
QUINOA OLIGOPEPTIDE ntụ ntụ
SEMEN CANNABIS OLIGOPEPTIDE ntụ ntụ
ỌK C AKWUMKWỌ AKW PEKWỌ AHPT
MILLET OLIGOPEPTIDE ntụ ntụ
SUNFLOWER ntụ ntụ
1. Gini bu leuprorelin acetate?
2. Ngwa Leuprolide acetate
3. Kedu ka leuprolide acetate si arụ ọrụ
4. Etu esi eji acupate leuprorelin?
5. Leuprorelin acetate Dosage na leuprorelin acetate Administration
6. Leuprorelin acetate n'akụkụ mmetụta
1. Gịnị bụ leuprorelin acetate?
Leuprorelin acetate bụ ụdị peptide eji ya na ọgwụ ndị ọzọ ji agwọ ọrịa prostate na ụmụ nwoke. Agbanyeghị, ọ naghị agwọ ọrịa ahụ kama ọ ga - egbochi ya ịgbasa ma nyere aka igbochi nsonaazụ cancer yana akụkụ ahụ gị. A na-ere Leuprorelin na United States nke America n'okpuru aha njirimara Lupron, ọ nwere ike ịdị na mba dị iche iche n'okpuru aha ika dị iche.
Imirikiti ụdị ọrịa cancer prostate na-adabere na homonụ testosterone iji too ma gbasaa n'ime ahụ gị. Otú ọ dị, Leuprorelin acetate ntụ ntụ na-arụ ọrụ site na igbochi mmepụta nke homonụ testosterone na-eme ka ọ dị mfe iji belata uto nke mkpụrụ ndụ cancer prostate yana belata ihe mgbu ma ọ bụ ihe isi ike ndị ọrịa na-enweta mgbe ha na-amị mamịrị.
N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị na-eji Lupron agwọ ọrịa mgbaàmà nke endometriosis, nke a na-akpọkarị fibroids uterine. Leuprolide acetate na afọ ime bụ nnukwu nchegbu ụmụ nwanyị, egbula ọgwụ a ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịmụ nwa mana gị na dọkịta gị nwere ike ikwurịta ya. Lupron bụ ọgwụ injectable nke a ga-agbanye n'ime ahụ ike kwa ọnwa 1-6. Gbaa mbọ hụ na ị na - ewere dọkịta gị, mana enwere ike zụọ gị otu esi agbanye onwe gị maka nchịkwa nchịkwa dị mfe na nkasi obi nke ụlọ gị.
Leuprolide acetate zụrụ dị ngwa ngwa na ntanetị ọgwụ na ntanetị. Ọnụ leuprolide acetate nwere ike mgbe ụfọdụ dịgasị iche dabere na ebe ịzụrụ ya. Agbanyeghị, ọ dị mma ị nweta ndenye ọgwụ ziri ezi n'aka ọkachamara ahụike. Cheta ịdụbiga ọgwụ ókè ma ọ bụ iji leuprorelin acetate eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi nwere ike ibute nsonaazụ siri ike, ị kwesịrị izere ịnara ya na-enweghị nyocha ahụike. Ọrịa cancer bụ ajọ ọrịa, ị gaghị etinye ihe ọ bụla ịnara ọgwụ ya n'echeghị echiche. Gwa dọkịta gị maka ịmatakwu banyere leuprorelin acetate ntụ ntụ usoro onunu ogwu.
2. Leuprolide acetate ngwa
Leuprolide acetate ntụ ntụ bụ ihe nwere ike gonadotropin na-ewepụta agonist na-anabata hormone (GnRHR), ọ chọpụtawo na ọ dị mkpa na ngwa nyocha dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, n'ịgwọ ọrịa fibroids nke uterine, ọrịa cancer a na-efe efe, isi mmalite nwanyị ime mmụọ (ọnọdụ nke na-eduga ụmụaka na-eru ntozu ya n'isi karịa ka a tụrụ anya), na endometriosis. N'ime ọnọdụ ahụike ndị a, enwere ike iji leuprolide mee ihe naanị ma ọ bụ ọgwụ ndị ọzọ. A nwekwara ike iji ọgwụ a jikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ iji gwọ ọrịa anaemia, nke na-esite na eriri fibroids.
The leuprorelin acetate usoro onunu ogwu ekwesịrị ịgbanye gị ahụ n'ime ahụ gị. Jiri sirinji insulin U-100 iji nye gị onunu ogwu gị ma hụkwa na ị na-eji sirinji nke ndị nrụpụta nyere. Ọ bụrụ na ị ga-eji sirinji dị iche iche, wee jiri naanị 0.5-mL nwere ike iwepu. Cheta na leuprorelin acetate ntụ ntụ kwesịrị ịgwakọta dịka onye nrụpụta kọwara tupu o jiri ya. Ikwanye ihe ngwọta nwere ike ọ gaghị enye gị ezigbo agwakọta. Mmekọrịta Leuprolide ga-enyere gị aka inweta nsonaazụ gị chọrọ mana nweta ha n'aka dọkịta gị mgbe niile.
3. Kedu ka leuprolide acetate si arụ ọrụ?
Usoro Leuprorelin acetate na-eme ihe dabere n'ọnọdụ ahụike dị n'okpuru ọgwụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ejiri ya maka ọgwụgwọ ọrịa cancer, ọ na-ebelata mmepụta homonụ testosterone, nke na-enyere uto na mgbasa nke mkpụrụ ndụ kansa. Ọ bụ ezie na Leuprorelin Acetate ntụ ntụ (74381-53-6) iji anaghị agwọ ọrịa kansa, ọ na - enyere aka belata ihe mgbu na uto nke mkpụrụ ndụ cancer na ahụ gị. Agbanyeghị, enwere ike ị drugụ ọgwụ naanị, mana ndị dọkịta na-atụ aro ka ị were ya na ọgwụ ndị ọzọ na-arịa ọrịa prostate maka nsonaazụ kacha mma.
Ọ bụ ezie na akwadoghị ọgwụ maka ojiji na ụmụ nwanyị na mba ụfọdụ, ọ gosipụtara na ọ dị irè n'ịgwọ endometriosis. N'ebe a, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ site na igbochi mmepụta estrogen na ahụ gị, nke a na-akpọkarị "estrogen surge." N'ebe a, usoro ihe omuma nke Leuprorelin acetate na-elekwasị anya na mbenata estrogen, hormone nke na-ahụ maka oge gị. Mgbe ịmalitere ị leụ ọgwụ leuprorelin acetate, estrogen ga-ebili maka izu ole na ole mbụ, emesịa estrogen ga-agbada. Usoro a nwere ike ịkwụsị oge gị nwa oge, yana nke a ga - eme ka ihe mgbaàmà nke endometriosis belata.
Leuprorelin acetate ọrịa cancer ara, n'aka nke ọzọ, na-enyere aka n'ịlụso ọrịa na-egbu egbu ụmụ nwanyị ọgụ. Ọ bụ ezie na progesterone na estrogen abụghị ihe kpatara ọrịa kansa, ha na-arụ oke ọrụ na-enyere aka uto na mgbasa. Mmepụta nke homonụ abụọ a nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ usoro ịwa ahụ iji wepu ovaries ma ọ bụ usoro ọgwụgwọ.
Luteinizing hormone nke pituitary gland mepụtara, na - ebute mmepụta nke progesterone na estrogen site na ovaries. Ojiji leuprorelin acetate na-egbochi mmepụta nke hormone luteinizing, si otú ahụ belata estrogen na progesterone na ahụ gị. Nke ahụ pụtara na uto na mgbasa mkpụrụ ndụ cancer ga-akwụsịlata, na-eme ka ọ dị mfe ịchịkwa ọrịa kansa.
4. Kedu ka esi eji leuprorelin acetate?
Enwere ike ime nlekọta leuprorelin acetate n'ụzọ abụọ dị mkpa site na ogwu ogbugba ma ọ bụ ntụ ntụ, nke a na-ejikarị edozi ya na ihe mgbaze tupu ewere usoro onunu ogwu. Ndị dọkịta bụ ndị kachasị mma iji rụọ ọrụ abụọ anyị, mana mgbe a zụrụ gị, ị nwere ike ịme ya n'ụlọ.
(1) Ọkpụkpụ Leuprorelin acetate
Ọkpụkpụ Leuprorelin acetate bụ ọgwụ na-eme ogologo oge nke a na-agbanye intramuscularly ma bụrụ onye dọkịta ga-enye ya. Ọgwụ a na-enyekarị otu ugboro kwa ọnwa ma ọ bụ ọbụna otu ugboro kwa ọnwa 3, 4, ma ọ bụ 6 dabere na ọnọdụ gị. N'aka nke ọzọ, enwere ike ịnye ọgwụ ogwu leuprorelin acetate oge ụfọdụ dị ka nkwụsịtụ ogologo oge a na-akpọkarị (Eligard) nke a na-agbanye n'ime akwara gị kwa ọnwa 1, 3, 4, ma ọ bụ 6.
Mgbe nyochachara ahụike, dọkịta gị ga - adụ gị ọdụ otua yana kọwaa ọgwụ kacha mma maka peptide ntụ ntụ maka gị. Oge dọkịta gị ga-ewe ga-ekpebikwa dọkịta gị mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Injections na-adịkarị iche site n'aka onye ọrịa ọzọ.
(2) Ntughari ntụ ntụ Leuprorelin acetate
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ikpebi iji leuprorelin ntụ ntụ, nke bụkwa ụdị dị ike nke ọgwụ a siri ike nke na-enyere aka n'ịlụso ọnọdụ ahụike dị iche iche ọgụ, dịka e kwuru na mbụ. Otú ọ dị, a ghaghị ịkwadebe Leuprorelin acetate ntụ ntụ nke ọma ma ọ bụ gbanwee ka ọ gbanye ya n'ime akwara gị. Ọ dị mkpa ka a nyochaa ntụ ntụ ma ị gaghị eji sirinji rụrụ arụ. Mgbe ị na-akwadebe leuprorelin acetate, jiri diluent nke ndị na-emepụta ọgwụ nyere. Gbanye ihe na-acha ọcha ọcha n'ime nkwụsị ahụ ruo mgbe ọ malitere ịmalite, gbaa mbọ hụ na ijide sirinji ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ugbu a hapụ onye na-atụgharị uche site n'ịkwanye onye na-adọkpụ ihe nwayọ maka ihe dịka 8 sekọnd ruo mgbe mbido mbụ rutere akara na-acha anụnụ anụnụ n'etiti gbọmgbọm ahụ. N'oge a niile, mee ka sirinji kwụ ọtọ.
Jiri nwayọ gwakọta ntụ ntụ iji hụ na ọ mebere nkwanye anwụrụ edo edo. Ọ bụrụ na ntụ ntụ adịghị kpamkpam na gwọọ ya, pịa sirinji ahụ ruo mgbe ntụpọ niile na-agbaze kpamkpam. Ejila usoro ogwu ahụ ma ọ bụrụ Leuprorelin Acetate ntụ ntụ (74381-53-6) abanyela na nkwusioru kpamkpam. Mgbe ị rụzigharị, were usoro ị ga - eme ngwa ngwa ebe ọ bụ na nkwusioru ahụ ga - amalite n'ime obere oge. Agbanyekwala, ewerela ihe mgbochi ọ bụla ejibeghị n'ime elekere abụọ ka emechara nwughachi n'ihi na enweghị ebe nchekwa na ọ nwere ike ibutere gị ahụike.
5. Leuprorelin acetate Dosage na leuprorelin acetate nchịkwa
Leuprorelin acetate nchịkwa bụ naanị ogwu, na ị kwesịrị ị na-enweta usoro onunu ogwu site n'aka onye ọkachamara ahụike maka nsonaazụ kacha mma. Dị ka ị na-enyo enyo na ị nwere ọnọdụ nke peptide ntụ ntụ nwere ike ịgwọ, ya adịla mgbe ị ga-azụta ma bido were ya na-enweghị nyocha ahụike. Ndị na-emepụta acupate Leuprolide nwere ike igosipụta usoro ị drugụ ọgwụ ahụ na ntuziaka ojiji, mana nke ahụ nwere ike ọ gaghị abara gị uru.
Ahụ mmadụ dị iche iche, ụfọdụ usoro onyonyo nwere ike ịdị oke elu iji kpughee gị na mmetụta leuprolide acetate dị iche iche ma ọ bụ dị ala na-enweghị ike iwepụta nsonaazụ ndị achọrọ. Leuprolide acetate ọnụọgụ dịgasị otu onye gaa na nke ọzọ, a na-ekpebikwa ya site n’otú e si agwọ ya yana afọ onye ọrụ. Leuprolide acetate bụ ọgwụ ekwesịrị ịdaba n'okpuru nduzi onye dọkịta ebe ọ nwere ike ịdị ize ndụ mgbe ejiri ya mee ihe ma ọ bụ ị overụbiga ya ókè. Ndị a bụ ụfọdụ usoro ọgwụgwọ leetrolide acetate dị iche iche maka ọnọdụ ahụike dị iche iche;
Ogwu leuprorelin acetate usoro onunu maka oria Prostate
N'ebe a, usoro ọgwụgwọ dị iche iche nwere ike ịdị mgbagwoju anya, mana dọkịta gị ga-ahọrọ nke kwesịrị gị. Usoro onunu ogwu ndi a bu nke a;
1mg injection otu ugboro kwa ụbọchị
5mg injection intramuscular kwesịrị iwere otu ugboro kwa ọnwa.
I nwekwara ike ịga maka 22.5 mg nke ị ga-ewere otu ugboro n’ime ọnwa atọ ọ bụla.
Enwekwara usoro ọgwụ ịgba ọgwụ 30mg otu ugboro n’ime ọnwa anọ ọ bụla.
45mg injection intramuscular ị ga-ewere otu ugboro n’ime ọnwa isii ọ bụla.
I nwekwara ike ikpebi ịga maka ihe ntanetị nke 65mg nke na-agbanwe agbanwe ebe ọ bụ na ị ga-ewere usoro onyonyo otu ugboro kwa ọnwa 12 ma ọ bụ otu afọ.
Ogologo leuprorelin acetate ntụ ntụ maka Endometriosis
Ngwadogwu akwadoro maka ndị ọrịa endometriosis bụ 3.75mg, nke a ga-agbanye otu ugboro kwa ọnwa maka ihe dị ka ọnwa isii. Enwekwara nhọrọ ọzọ ebe dọkịta gị nwere ike ịtụ aro 11.25mg, nke a ga-agbanye gị otu ugboro kwa ọnwa atọ. Womenmụ nwanyị na-ewere leuprorelin maka endometriosis kwesịkwara ịtụle ịga maka ọgwụgwọ mgbanwe ọgwụ, nke dị mma iji belata mgbaàmà vasomotor na oke njupụta nke ọkpụkpụ. Agbanyeghị, ịtụle uru ọgwụgwọ ọ bụla ekwesiri ibute ụzọ mgbe ị na-ahọrọ usoro ọgwụgwọ dị mma.
Pediatric leuprorelin acetate dose maka precocious Puberty
Comata ihe nwata nwoke na nwanyi amara bu onodu ebe umu aka zuputara agwa okenye dika eturu ya. Mgbe oge ntozu bidoro tupu afọ 8 maka ụmụ agbọghọ na 9 n’ime ụmụ nwoke, a na-ele ya anya dị ka oke. Enwere ike ijikwa ọnọdụ ahụ site na ị leụ ọgwụ leuprorelin acetate. Agbanyeghị, ịdị arọ nwatakịrị ahụ ga-ekpebi ụzọ kwesịrị ekwesị ọ ga-esi gwọọ ọrịa ahụ. Ọkpụkpụ ọgbụgba bụ dịka ndị a;
Nkịtị dịkarịa ala karịa 25kg a tụrụ aro bụ ntụtụ 7.5mg otu ugboro n'ọnwa
Nwatakịrị ụmụaka na-atụ 25 na 37.5 n'arọ kwesịrị ị aụ 11.25 otu ugboro kwa ọnwa.
Maka ụmụaka dị n’elu37.5kg, usoro a tụrụ aro bụ ịgbanye 15mg otu ugboro kwa ọnwa.
Mgbe ị na-ewere ọgwụ Leuprolide ntụ ntụ gị, ekwesịrị ịnwale ọkwa nke homonụ mgbe ọnwa 1 ma ọ bụ 2 dị iche iche iji hụ na mgbachi ume gonadotropin zuru ezu. Nyocha ahụike mgbe niile ga-enyere dọkịta gị aka ileba anya n'ọgwụgwọ ọgwụgwọ yana dozie ihe ọ bụla nwere ike ịpụta n'oge usoro ọgwụgwọ ahụ.
Cheta, dọkịta gị bụ onye kwesịrị ịtọ usoro ọgwụgwọ Leuprorelin maka ndị okenye na ụmụaka mgbe ọ nyochachara ọnọdụ ahụike. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịgwa gị ka ịmalite site na iji obere dosages, nke enwere ike gbanwee oge mgbe ịlele nzaghachi ahụ gị. A naghị anabata ọgwụ Leuprolide acetate na afọ ime dị ka ọgwụ nwere ike imerụ nwa ebu n’afọ. A dụrụ ụmụ nwanyị ọdụ ka ha ghara ị powderụ ntụ peptide a mgbe ha na-atụ anya ma ọ bụ mgbe ha na-eme atụmatụ ịtụrụ ime n'oge ọ bụla.
6. Leuprorelin acetate mmetụta mmetụta
N'ọtụtụ ọnọdụ, mgbe ị na-eji ọgwụ ọ bụla eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi, ọ ga-ekpughere gị na mmetụta dị egwu; n’agbanyeghi, ike n’ahu gi mgbe ufodu puru ikpebi ihe ike. Otu ihe a na - eme mgbe ị na - esoghị ntuziaka usoro onunu ogwu mgbe ị na-ewere leuprorelin acetate. Wardọ aka ná ntị Leuprolide nwere ike ịdị iche na-adabere n'ụdị dị iche iche, dịka ịdị arọ nke anụ ahụ na nnagide ahụ. Fọdụ ndị ọrụ na-enweta nsonaazụ ọbụlagodi mgbe ha na-ewere leuprolide mmekọrịta dị ala na-adaghị adaba ebe ndị ọzọ nwere ike iji nnukwu dosages ma nwee uru.
E nwere ọtụtụ mmetụta leuprorelin acetate side effects nke ahụ nwere ike inweta ahụkarị ndị ọrụ niile, mana ha na-apụ n'anya oge. Nsonaazụ ndị mepụtara ọfụma dị ize ndụ, ozugbo ị mechara ha, ị kwesịrị ịgwa dọkịta gị ozugbo. N’aka nke ozo, enwerekwa nsogbu ndi ozo n’enweghi ike ihu ka ị na - ewere leuprorelin ntụ. Mmetụta ndị a dị otu a;
(1) Nsonaazụ leuprorelin acetate na-enwekarị
Mgbu gburugburu mpaghara ịgba ntụtụ
(2) Siri ike leuprorelin acetate side sakamako
Ọ bụrụ na ị na-ahụ mmetụta ndị ọzọ na-esote chọọ nlekọta ahụike ozugbo ị nwere ike;
Oge na-adịghị ma ọ bụ na-agba ume ngwa ngwa
Odumchi ma obu ukwu ukwu gi ma obu aka gi
Ihe isi ike
(3) Oke mmetụta leuprorelin acetate side sakamako
Enwerekwa mmetụta ndị metụtara ya na ọgwụ a anaghị adịkarị. Kaosinadị, ha siri ike mgbe ha mere. N’ihi ya, ị ga-agwa dọkịta gị ozugbo ọ ga-aka njọ. Mgbe ụfọdụ, ha na-eme n'ihi ịdoụbiga mmanya ókè, ma ọ bụ nke ahu anataghi ihe ha tinyere;
Bleedingmịpụta ọbara ọbara nke ukwuu nke ndị ọrụ nwanyi.
Leuprolide acetate na ọrịa shuga nwekwara mmetụta ọzọ ọ na-adịghị ahụkebe nke ị nwere ike inwe. Ekwuru na ogwu a na-abawanye nsogbu nke ibute ọrịa shuga.
Voicemalite ụda nke nwanyị
Na mmechi, leuprorelin acetate abụrụla ezigbo ọgwụ mgbe ejiri ya n'ụzọ ziri ezi na ụwa ọgwụ. N'otu oge ahụ, leuprolide acetate buy dị na ahịa ọgwụ gị kacha nso, ị nwekwara ike ịme iwu gị na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche. E nwere ọtụtụ ndị na-emepụta acetate leuprolide na ndị na-ebubata ya na ahịa taa, mana mgbe niile hụ na ị na-eme nyocha gị iji nweta ngwaahịa dị mma na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Na ọnụ ahịa leuprorelin acetate dịgasị iche site n'aka otu onye na-ere ahịa, ọ bụ ya mere ị ga-eji mee nyocha kwesịrị ekwesị tupu ịzụrụ ọgwụ ahụ. Agbanyeghị, egbula ọrịa kansa ara leuprorelin acetate tupu ị nweta usoro ọgwụgwọ ziri ezi n'aka dọkịta gị.
Abụ, G., Gao, H., & Yuan, Z. (2013). Mmetụta nke leuprolide acetate na ọrụ ovarian mgbe cyclophosphamide-doxorubicin dabeere na chemotherapy na premenopausal ọrịa nwere ọrịa ara ara: nsonaazụ sitere na usoro nke abụọ nke usoro enweghị usoro. Oncology ọgwụ, 30(3), 667.
Köhler, G., Faustmann, TA, Gerlinger, C., Seitz, C., & Mueck, AO (2010). Ihe omumu nke na-achoputa iji choputa oru na nchekwa nke 1, 2, na 4 mg nke dienogest kwa ubochi maka endometriosis. Akwụkwọ bụ International Journal of Gynecology & Obstetrics, 108(1), 21-25.
Tunn, UW, Gruca, D., & Bacher, P. (2013). Ọnwa isii leuprorelin acetate depot formulations na ọrịa prostate dị elu: nyocha ahụike. Ihe ntinye ogwu, 8, 457.
Johnson, SR, Nolan, RC, Grant, MT, Ahịa, GJ, Siafarikas, A., Bint, L., & Choong, CS (2012). Ọkpụkpụ etuto etolite etinyere na leuprorelin acetate ọgwụ maka etiti oge ntorobịa. Journal nke paediatrics na ahụike ụmụaka, 48(3), E136-E139.
AKW .KWỌ AKENTKỌ
Galantamine Hydrobromide Mgbakwunye: Ọ Bụ Ezi Ọgwụ Maka Ọrịa Alzheimer?
Nootropics PRL-8-53: Ọ Na-eme Ka Ncheta na Learningmụta Ike?
Cycloastragenol Mgbakwunye: Uru, Ọgwụ, nchekwa & Nnyocha
Disclaimer: Anyị anaghị eme ọ bụla azịza banyere ngwaahịa ere na weebụsaịtị a. Enweghị ozi enyere na weebụsaịtị a ka FDA ma ọ bụ MHRA enyochala. A na-enye ozi ọ bụla e nyere na weebụsaịtị a ka anyị mara ihe niile, ọ bụghị iji dochie ndụmọdụ nke onye dọkịta ruru eru. Ihe akaebe ma ọ bụ nyocha ngwaahịa ọ bụla nke ndị ahịa anyị nyere abụghị echiche nke Phcoker.com na anaghị ewere ya dị ka nkwanye ma ọ bụ eziokwu.